၈၈ ရဲ့ နော်မန်: 4/4/10 - 4/11/10
“ရှေ့တန်းပျော်တဲ့လား” အပိုင်း - (၂)
အပိုင်း (၁) ကို ဒီနေရာမှာ နှိပ်ပြီး ပြန်လည်လေ့လာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ရင်ခုန်စွာ စောင့်စားခဲ့ရတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ ယာဉ်တန်းဟာ နေ့လည် ၁၃:၃၀ နာရီမှာ ရောက်ရှိလာပါတော့တယ်။ ဒီနောက်တော့ ကျနော်တ်ို့ကိုပါ တင်ဆောင်ပြီး ၃ နာရီသာ သွားရတဲ့ ကော့ကရိတ် - မြ၀တီ ခရီးကို တစ်ညအ်ိပ် ချီတက်ခဲ့ကြ ပါတယ်။ စခန်းချ ညအိပ်ရပ်နားခဲ့တဲ့ နေရာကတော့ ၎င်းလမ်းပိုင်းက ကျောက်တစ်လုံးအရပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် နောက်နေ့ နံနက် ၀၇:၀၀ နာရီမှာ ဆက်လက်ထွက်ခွာလာကြရာ သင်္ဃန်းညီနောင်ကို ရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီကိုရောက်တော့ မိမိတို့လည်း သက်ဆိုင်ရာအလိုက် စစ်ကြောင်းခွဲထုတ်လိုက်ပြီး ရှေ့တန်းတပ်မ (၂၂) ကို ၀င်သတင်းပို့ရ ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာပဲ နွားချေးနဲ့ဆား ရောစပ်ပြုလုပ် ထားတဲ့ Bio Battery တွေကို ရှေ့တန်းစခန်းတစ်ခုလျှင် ၂ လုံး ကျဖြင့် ဝေပေးရာ မိမိမှ ပွိုင့် - ၁၉၂၁ စခန်းအတွက် တာဝန်ခံကာ ထုတ်ယူခဲ့ပါသည်။ (၎င်း Battery များနှင့် ပတ်သက်၍လည်း သီးခြားတင်ပြသွားပါမည်။ စာရေးသူ)
၎င်းနောက်တော့ ရှေ့တန်းတပ်မမှ စီစဉ်ပေးသော ချောကားဖြင့် ရွှေကုက္ကိုလ်ရွာဘက်ရှိ ခွေးအတု လမ်းဆုံဘက်သို့ ဆက်လက်ထွက်ခွါလာပြီး ၎င်းအနီးရှိ မြတ်လေးစခန်းကုန်းသို့ စခန်းချိန်းစစ်သည်နှင့် ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ ချပေးပြီးနောက် မိမိတို့၏ ရည်မှန်းချက် ဖြစ်သော ပွိုင့် - ၁၉၂၁ သို့ ဆက်လက် ထွက်ခွါခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် မိမိတို့ ရည်မှန်းချက်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြရာ ၎င်းနေ့တွင် မိမိတပ်ရင်းမှူးမှ မိမိတို့ ရှေ့တန်းစခန်းနှင့် တွဲလျက်ရှိ ခြေလျင်စစ်ကြောင်းကုန်းသို့ သွား ရောက်ကာ စစ်ကြောင်းမှူးနှင့် တွေ့ဆုံ ပြီးနောက် ရန်သူတပ်တည်နေရာများနှင့် မိမိတပ်စခန်း တပ်တည်နေရာများ ပါဝင်တဲ့ မြေပုံညွှန်းများအား မိမိတပ်ရဲ့မြေပုံတွင် မတင်ရသေးလို့ မိမိကိုလည်း မြေပုံတင်ခိုင်းပါသည်။ ကျနော့်သူငယ်ချင်းမှာလည်း ၎င်းစစ်ကြောင်းတွင် ဒုတပ်ရင်းမှူး IO လုပ်နေသဖြင့် တော်တော် အဆင်ပြေသွားပါသည်။
ညနေရောက်သောအခါ စစ်သည်များမှာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားသည့် သဘော ပိုက်ကျော်ခြင်းခတ်ခြင်း၊ ဘုရားဝတ်တက်ခြင်း များ ပြုလုပ်ကြပြီးနောက် လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေထိုင် နေကြပါသည်။ ထို့နောက် စခန်းအောက်ခြေတွင် ကားသံများကြား၍ ဘာပါလိမ့်ဟု မေးရာ ၎င်းကားများမှာ သစ်ခိုးထုတ်သောကားများ ဖြစ်ကြောင်း၊ တရားဝင်လိုင်စင် ယူထား သော်လည်း လိုင်စင်တွင် ပါရှိသည်ထက် ပိုမို ခိုးထုတ်ကြကြောင်း၊ ထိုသို့ ခိုးထုတ်နိုင်ရန် စခန်းထိုင်အဖွဲ့ကို ပေးကမ်းရကြောင်း၊ ၎င်းကား များရှိနေ၍ စစ်သည်များလည်း အတော် အသင့် အဆင်ပြေ အသက်ရှူချောင်ကြောင်း ပြောပြ၍ သဘောပေါက်လာပါသည်။ နိုင်ငံပိုင် သယံဇာတတွေ ဆုံးရှုံးနစ်နာတာကိုတော့ ဘယ်သူကမှ ဂရုမထားကြဘဲ ပြောနေကြတာတော့ မျိုးချစ်စိတ်၊ တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်ဆိုတော့ ရဲထက် လည်း ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး။
အင်း… ဒါကြောင့် စစ်သည်တွေ နောက်တန်းမှာ နေမပျော်ပဲ ရှေ့တန်းချည်း လိုက်ချင်နေကြတာကိုး လို့တော့ သိခဲ့။ ပြီးတော့ ၎င်းနေရာတွင် အရက်ရှာဝယ်မရပေ။ ၎င်းအတွက် လူရည်လည်သော စစ်သည်များမှာ သင်္ဃန်းညီနောင်တွင် အရက်ဆီများ ကို ၀ယ်လာပြီး ပြန်ရောင်းကြရာ ၎င်းတို့အတွက် စီးပွါးလည်း ဖြစ်နေပါသည်။
သို့နှင့် မိမိ၏ တာဝန်ဖြစ်သော တပ်ကြပ်ဝဏ္ဏ သေဆုံးမှုကို စစ်ဆေးရန်အတွက် မေးမြန်းကြည့်ရာ ကျနော့်တပ်ရင်းမှူး ထင်ထားသည့် အတိုင်းပင်။ သာမန် ရေခပ်ဆင်းရင်း သစ်ပင် ပိသည် မဟုတ်ပဲ အလှည့်ကျ သစ်ကားများအား ပိုက်ဆံတောင်းစဉ် ဖြစ်သည်ကို သိရှိရလေသည်။ အော်….. နိုင်ငံတော်ရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် စစ်သည်တွေကို ရှေ့တန်းပို့ကာမှ တိုက်ရင်း မသေပဲ ငွေတောင်းရင်း သေရသည်တဲ့လေ။ ဒါတွေဟာ တကယ်တော့ အုပ်ချုပ်မှု၊ ထောက်ပံ့မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အထက်က သေချာ မစီစဉ်ပေးတဲ့အတွက် အခုလို ဖြစ်ရခြင်းပါ။
၂၀၀၉ ခုနှစ် အတွင်းလား ၂၀၀၈ အကုန်ကိုလား၊ ကျနော် သေချာ မမှတ်မိတော့ပါ။ တပ်မတော်ရိက္ခာထဲမှ ပဲကိုလျှော့လိုက်ပြီး ကျန်ရိက္ခာခြောက်များအစား ငွေကျပ် ၃၀၀ ကို အစားထိုး ပေးပါသည်။ သို့သော် ပို၍သာ ဒုက္ခရောက်ရပါသည်။ ဤသို့သာ ဆက်လုပ်နေလျှင် တပ်မတော်မိသားစုများမှာ ငတ်သေဖို့သာ ရှိပါတော့သည်။ ထို့အတွက် ရှေ့တန်း စခန်းများတွင် ဤသို့ဖြစ်ပျက်နေသည်က စစ်သည်များ၏အပြစ် လုံးဝ မဟုတ်ပါ။ သောက်သုံးမကျ ကိုယ်ကျိုးရှာနေသော မိမိတို့ နိုင်ငံနှင့် တပ်မတော်ကို ဆင်းရဲတွင်းသို့ ဆွဲချပြီး ကိုယ်တိုင်နှင့် ကိုယ့်မိသားစုများကျတော့ ချမ်းသာပြီးရင်း ချမ်းသာနေသော အာဏာရှင်တစ်စုတွင် လုံးဝတာဝန်ရှိပေသည်။
သို့သော် လက်ရှိအနေအထားအရ တိုက်ပွဲတွေကို တိုက်ရင်း တိုင်းပြည်အတွက် အသက်ပေးချင်လို့ ပျော်ကြတဲ့ ရှေ့တန်းပျော်များ မဟုတ်ကြတော့ဘဲ အော်… နောက်တန်းထက် စာရင် အစားချောင် အနေချောင်သလို ရှိလို့ ရှေ့တန်းပျော်နေရတာတွေကို ကြည့်ကာ မိမိနိုင်ငံတော်ရဲ့ လုံခြုံရေး၊ တပ်မတော်ရဲ့ ဂုဏ်ကျက်သရေ မြင့်မားရေးတို့အတွက် ရင်လေးနေမိပါသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စစ်သည်တွေ ရှေ့တန်းပျော်နေရခြင်းကို သုံးသပ်ရသော်……….
(၁) နောက်တန်းတွင် အရည်မရ အဖတ်မရ လူကြီးစစ်ဆေးခံရန် ပုံမှန်လုပ်နေကြရပြီး လက်တွေ့တွင် ဘာမှဖြစ်မလာသော သြ၀ါဒများကြောင့်သော်လည်းကောင်း။
(၂) နိုင်ငံတော်စီမံချက်ဆိုသည့် အာဏာရှင်များ၏ ယတြာလိုလို ဘာလိုလိုများကို လိုက်ပါ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေရမှုများကြောင့် လည်းကောင်း။
(၃) ရှေ့တန်းတွင်ကား ရှင်းသည်၊ မိမိတို့ လေ့ကျင့်ခန်းကို လုပ်ပြီးလျှင် အလှည့်ကျ စခန်းခံစစ် တည်ဆောက်ရေးကိုလုပ်၊ သည့်နောက် အုပ်ချုပ်မှုကိစ္စ လုပ်ပြီးလျှင် အေးအေးလူလူ နားနေရုံသာ ရှိသည်။ နောက်တန်းကဲ့သို့ လူကြီးလာမှာမို့တို့ ဘာတို့ ဆိုတာ မရှိ။ စတဲ့ ……. စတဲ့ …… အကြောင်းတွေကြောင့်… ရှေ့တန်းပျော် စစ်သည်ရဲဘော် အပေါင်းတွေ မွန်းကျပ်မှု၊ ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်မှုတို့အပေါင်းမှ ထာဝရ လွတ်ကင်းနိုင်ကြပါစေဟုသာ...။
Posted by နော်မန် at 12:38 PM